बुवा र छोराको सम्बन्ध निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु -GoodNews24 – GoodNews24
Home/अन्य/बुवा र छोराको सम्बन्ध निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु -GoodNews24
बुबा-छोराको सम्बन्ध जटिल हुन सक्छ। फरक फरक रुचि अनि उमेरको कारण दुवै जना बीच दुरी पैदा हुन् सक्छ । कहिलेकाँही बुबा र छोराले एक अर्काको विरुद्ध प्रतिस्पर्धी भएको जस्तो महसुस गर्छन्। कहिलेकाँही उनीहरूको पुरुष प्रवृत्तिहरू भावनाहरू व्यक्त गर्दैनन् किनकि उनीहरू दुवैले राम्रो बुबा-छोराको सम्बन्ध चाहन्छन् तर दुवैले यसलाई कसरी थाहा पाउने भनेर धेरै जान्दैनन्।
कडा बुबा-छोराको सम्बन्ध सिर्जना गर्ने र निर्माण गर्ने केही प्रमुख तत्त्वहरू ।
1. छोरासंग नजिक अनि बलियो सम्बन्ध बनाउने ।
हरेक छोराहरू आफ्नो बाबुबाट कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुन्छन । कुनै पनि छोराले आफ्ना बाबुलाई मुख्य रूपले हेरेर या अनुसरण गरेर नै मानिस बन्न सिक्छ। आफ्नो छोराको व्यक्तिगत विकासमा बुबाको प्रभाव प्राय अदृश्य हुन्छ तर वास्तविक हुन्छ। सबैले आफ्नो बुवाबाट नै धेरै कुरा सिक्दछ त्यस कारण बुबाले बिशेष गरेर, के गर्ने, के खाने, के लाउने, सबै कुराको प्रभाव छोराको ब्यबहार संग सम्बन्धित हुन्छ । जब उसले उसको बुवालाई अन्य पुरुषहरूसँग अन्तर्क्रिया हेरिरहेको हुन्छ, उसले कसरी पुरुषहरू कुरा गर्छन, कसरी तिनीहरू एक अर्कासँग सम्बन्ध राख्छन् र कसरी उनीहरू ब्यबहारिक मुद्दाहरूमा व्यवहार गर्छन् भनेर जान्छ। समयसंगै अन्य संगको तुलनाले नै छोराले आफ्नो बुवालाई गड फादर मान्दछ भने कसैले आफ्नो बुवालाई बेकार मान्दछ । त्यसैले आफ्नो छोराको नजरमा राम्रो हुन र आफु जस्तै बनाउन बुबाले आफ्नो छोरासंग साकारात्मक ब्यवहार संगै नजिकको सम्बन्ध कायम राख्नु पर्छ ।
2. सकेसम्म एउटै चासोको बिसयमा ध्यान दिने ।
मानिसहरुको इक्षा चाहना फरक फरक हुन्छ तर पनि केहि यस्ता कुरा पनि हुन्छन जो धेरैलाई मन पर्छ । बाबु छोराको सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि साझा इक्षा र रोजाइ वा साझा चासो बुझ्नु जरुरि हुन्छ । हरेक बाबुले छोराको चासो र चाहनालाई बुझेर त्यसको कदर गर्यो भने अवश्य बाबु छोराको सम्बन्ध सुदृढ बन्छ । आवश्यकता र चाहना फरक भएको अवस्थामा भने दुबैले दुबैको चासोलाई कदर गरेर अगाडि बढ्दा सम्बन्ध बलियो बन्छ ।
3.बुबा-छोरा हरेक गतिविधिहरूमा संगै सामेल हुने ।
कुनै पनि क्रियाकलाप संगै गर्दा उक्त व्यक्तिसंगको सामिप्यता पनि बढ्न जान्छ त्यसरी नै दैनिक क्रियाकलाप बाबु छोरा सामेल भएर गर्दा एक अर्का प्रतिको सद्भाव अनि सामिप्यता दुवै बढ्छ जसको कारण एक अर्काको कार्य गर्न शैली अनि स्वभाव पनि बुझ्न सहज हुन्छ । एक अर्कालाई राम्रो संग बुझे पछि नै सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सक्छ । ब्यायामका, खेलकुद, किनमेल, जस्ता साधारण गतिबिधिमा संगै सामेल हुने ।
4.आफ्ना छोराको कुरा सुन्ने ।
सम्बन्धलाइ सुधार्न एक अर्काको कुरा सुन्नु निकै नै महत्वपुर्ण छ । कुनै पनि बाबुले हुर्कदै गरेको छोराको कुरा सुन्नु बाबुको कर्तव्य भित्र पर्दछ । उमेरसंगै मानिसमा इक्षा चाहनाको पनि वृद्धि हुदै जान्छ कति इक्षा हरु व्यक्त गर्न सजिलो हुन्छ त कतिपय चाहना या समस्या चाहेर पनि भन्न नसकिने अवस्था हुन्छ ,यी कुरालाई ध्यानमा राखेर एक बाबुले आफ्नो छोराको बारेमा चासो लिने इक्षा चाहना सोध्ने अनि पुरा गर्ने गरेमा बाबु छोराको सम्बन्धमा कहिल्यै फाटो आउदैन ।
5.बाबु छोराको सम्बन्धनमा मित्रता कायम गर्ने ।
बाबुछोराको सम्बन्ध साथीको जस्तो हुनु पर्छ तव मात्र एक अर्काको भावना बुझ्न सजिलो हुन्छ ,छोराले बाबुलाई साथि सरह सम्झिन सक्यो भने आफ्नो हरेक कुरा शेयर गर्न सहज ठान्दछ र उ बाबु संगको हरेक पल रमाइलो र खुशी साथ व्यक्त गर्न सक्छ । बाबु छोरा बिचमा हुने दुरी मेटाउन यी दुइ बिचको सम्बन्ध मित्र जस्तो हुन् आवश्यक छ ताकि छोराले बाबुसंग कुनै पनि कुरामा हिचकिचावट नगरोस अनि बाबुले पनि , यस्तो सम्बन्ध कायम भएमा छोराले बाबुको सहि कार्यको अनुसरण गर्न सहज हुन्छ ।
बुवा परिवारको मेरुदण्ड हो भने छोरा परिवारको भबिश्य । एकले अर्कालाई बुझ्न सके र एकले अर्कासंग निरन्तर सम्बन्ध कायम गर्न सके परिवार अर्थपूर्ण र सार्थक हुन्छ ।
[irp posts=”3415″] [irp posts=”3558″] [irp posts=”3605″] [irp posts=”3790″] [irp posts=”2573″] [irp posts=”3875″]
अमेरिकामा मानव तस्करी उन्मूलन क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली युवा – GoodNews24
व्यावसायिक घरभाडा मिनाहा गर्न महासङ्घको माग-GoodNews24
विदेशबाट ८० हजार १६ नेपाली स्वदेश फर्किए-Goodnews24
Pingback: चोर परिवर्तन भएको कथा- GoodNews24 – GoodNews24
Pingback: जग्गा किन्नु अघि विचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुराहरु – GoodNews24